Christina Ricci Anopa Kumashure-kwe-Zvikamu Rwendo seChitatu Addams - iHorror
musha	Horror Varaidzo Nhau	Christina Ricci Anopa Kumashure-kwe-Zvikamu Rwendo seChitatu Addams
Christina Ricci Anopa Kumashure-kwe-Zvikamu Rwendo seChitatu Addams
by Anthony Pernicka Dai 4, 2022
by Anthony Pernicka Dai 4, 2022 13,972 maonero
Titambire Vaenzi Vanoremekedzwa
Tichangobva kuzivisa izvozvo Christina Ricci akaputira firimu basa rake mune ramangwana Tim Burton Netflix yakatevedzana yakangonzi Chitatu. Ricci anenge asiri kudzoreredza basa rake sewechidiki ane hurombo watinoda zvakanyanya, asi isu tinogona kuve neruzivo rwebasa raari kutamba.
Sezvatakataura gore rapfuura, Tim Burton aive nerunyerekupe rwekutarisisa Ricci kutamba chinzvimbo chaMorticia!
Ini handigone kumirira kuona iwo mafoto ekusimudzira ane chokwadi chekuperekedza kushambadzira kweiyo Netflix show itsva. Mufananidzo uri pamusoro hausi wemutsetse mutsva asi unotipa zano rekuti Ricci angataridzika sei kana, chokwadi, ari kutamba chinzvimbo chaMorticia.
Kutaura kwese uku pamusoro paChristina Ricci kupindazve munyika yeAddams kune yangu yese nostalgic inonzwa kurira. Saka pandakamhanya pachikamu ichi cha1993 chemudiki Ricci achitipa rwendo rwemhuri yeAddams, ndaifanira kugovera.
ET yakashanyira seti ye 'Addams Family Values' muna 1993 uye Christina Ricci akapa kuseri kwezviitiko muunhu seChitatu Addams! Ricci anotitora mukati meAddams Mansion, uye anoratidza uko iye naPugsly vanogona kuwanikwa vachipinda mudambudziko.
Bookmark iHorror.com sezvo isu tichave tichitumira chero ruzivo rutsva rwatinogamuchira pachirongwa ichi!